Yiziphi izinhlobo zokungahambi kahle ezibangelwa yi-urticaria? - GAAPP
Yiziphi izinhlobo zokungahambi kahle ezibangelwa yi-urticaria?
Ikhaya>Yiziphi izinhlobo zokungahambi kahle ezibangelwa yi-urticaria?
Yiziphi izinhlobo zokungahambi kahle ezibangelwa yi-urticaria?Ipulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T13:42:12+02:00
Ingabe wake — mhlawumbe lapho useyingane — wake wangena ezimbabazeni ezihlabayo? Ngemuva kwalokho usakhumbula ukulunywa nokushisa nomuzwa wokuthi uzonwaya. Imvamisa, ukulunywa kuyisibonakaliso esingemnandi nesibuhlungu kakhulu se-urticaria. Iziguli ezithintekile "zingaqhutshwa zenyuswe ngodonga" futhi kaningi azilali. Ngenhlanhla, ukulunywa (ngokungafani nokulunywa okuhambisana ne- i-atopic eczema/ i-neurodermatitis, ngokwesibonelo) icasula ukugcotshwa nokungaklwebheki, okusho ukuthi, isikhumba esiklwebhiwe ngozipho oluhlaza asivamile ukubonwa. Cishe njalo, isikhumba esithintekile sithathwa njengokushisa kakhulu nangemva kokuxazululwa kwesiqephu somile. Kwesinye isikhathi iziguli nazo zibika ngokusha kwesikhumba; kuyaqabukela, kubikwa izinhlungu eziqondile ezindaweni zesikhumba ezithintekile. Ezigulini ezine-urticaria amasondo avame ukwenzeka kuwo wonke umzimba, hhayi kanye kuphela, kepha kaningi ngosuku nangosuku zonke izinyanga, iminyaka, noma amashumi eminyaka.
Ngesikhathi sokuhlaselwa kwe-urticaria, kungenzeka ikhanda noma ubuhlungu obuhlangene. Ezimweni ezinjalo, kufanele kuqale kuqinisekiswe ukuthi ingabe isifuba, ukulunywa, noma ukuvuvukala kungumphumela wokwelashwa kobuhlungu futhi kudalwe, ngokwesibonelo, ngokusebenzisa i-acetylsalicylic acid (i-ASA, isb ku-aspirin) noma okunye okuhlobene namakhemikhali izidakamizwa. Siyazi ukuthi imishanguzo eminingi ingadala isifuba. Iziguli eziphethwe isifuba kufanele zithathe amaphilisi ezinhlungu angenazinkinga njenge-paracetamol esikhundleni se-acetylsalicylic acid. Cishe kokukodwa kweziyishumi zeziguli ze-urticaria isicanucanu, ukugaya ukudla noma ezinye izinkinga zokuphefumula zenzeka. Ezimweni ezimbi kakhulu, lokho okuthiwa ukushaqeka kwe-anaphylactic kungenzeka futhi maqondana nezimo ze-urticaria. Kodwa-ke, ubuhlungu bungaba yinkomba yokuvuvukala, futhi kuyaziwa ukuthi ukuvuvukala okungamahlalakhona, okungukuthi, ukuvuvukala okuqhubeka isikhathi eside, kungadala ukuthi i-urticaria iqhubeke.
Akumangalisi ukuthi i-urticaria ingaba nomthelela omubi ezingeni lempilo lalabo abathintekile. Imiphumela ye-urticaria idlulela ngalé kwezimpawu zomzimba futhi ingaba nemiphumela emibi maqondana nenhlalakahle nekhwalithi yempilo yalabo abathintekile. Ukwehluleka okuvamile kwemizamo yokuthola imbangela eyisisekelo ye-urticaria, izimpawu ezingalindelekile, kanye nomthwalo obalulekile omelwe yilesi sifo kuvame ukuholela ekukhungathekeni kulabo abathintekile.
Ukungahambi kahle okubangelwa yi-urticaria kungaholela ekuphazamisekeni kokulala nobuthakathaka. Ukuphazamiseka kokulunywa nokulala kungaba nomthelela omubi emisebenzini. Iziguli eziningi zizizwa zikhawulelwe empilweni yansuku zonke. Lesi sifo futhi siholela ekuvinjelweni koxhumana nabo emphakathini, futhi, kamuva, ekuhlukanisweni nasezizungu. Ngokuvamile, ukukhathazeka nokudangala kuyenzeka. Kwesinye isikhathi, labo abathintekayo bahlushwa imicabango yokuzibulala. I-Urticaria nayo ingumthwalo omkhulu kubambiswano, futhi impilo yomndeni inethonya elinamandla.